विवाहको ९ दिनमै श्रीमानको इन्का'उन्ट'र गरी श्रीमतीलाई पठाइयो जे'ल
केएमसी अस्पतालको तेस्रो तलाबाट २६ वर्षीय युवाले हा’म फालेपछी…
के तपाईंलाई थाहा छ कि एकपटक दिल्लीका केटाहरुले शाहरुख खानलाई कुटेका थिए ?
चेकजाँचका क्रममा हेलमेट भित्र १० लाख भेटिएपछी…
तपाईंको आज : २०७७ कार्तिक ३ सोमवारको राशिफल
भारतीय प्रहरीले इन्का’उन्ट’रमा विकास दुबेलाई शुक्रबार मा’रेको छ । उनीविरु’द्ध गत साता बिहीबार उत्तर प्रदेशको कानपुरस्थित बिकारु गाउँमा ८ जना प्रहरीलाई मा’रेको अभि’योग थियो । यस मामिलामा प्रहरीले यसअघि नै ५ जनालाई इन्का’उन्ट’र गरिसकेको छ । विकास दुबेका सहयोगी तथा भाइ अमर दुबे दुई दिनअघि मात्रै इन्का’उन्ट’रमा मा’रिएका थिए । यतिमात्रै होइन अमर दुबेकी नवविवाहित श्रीमती खुसी दुबेलाई पनि प्रहरीले जे’ल पठाएको छ ।
प्रहरीले यी युवतीलाई पनि कुख्यात अप’राधको षड्य’न्त्रकर्ता ठहर गरेको छ । ‘बिहेपछि माइतीबाट छुट्टिएर घर आएको दुई दिनमा श्रीमान् तथा घरपरिवारलाई बुझ्न त सकिदैन भने नव बेहुली कसरी ह’त्याका’ण्डको षड्य’न्त्रकर्ता हुन्छिन् ?’ खुसीका माइती पक्षको प्रश्न छ । उनीहरुका अनुसार अमर दुबेको परिवारले गुमराहमा राखेर विवाह गरेका थिए ।
बिहेको तीन दिनपछि ह’त्या
२९ जुनमा अमर दुबे र खुसीको भव्य विवाह भएको थियो । तीन दिनपछि २ जुलाईमा ८ जना प्रहरीको ह’त्या भयो र विकास दुबे, अमर दुबेसहितका व्यक्तिको नाम ह’त्याका’ण्डमा मुछियो । खुसीका बाबु श्यामका अनुसार उनी रंग लगाउने काम गरेर पाँच बच्चासहित परिवारको गुजारा गर्छन् ।
उनले दुई छोरीहरुको विवाह गरिदिएका छन् र आफ्नो छोरीहरु राम्रो घरमा परुन् भन्नेमात्रै सपना थियो । खुसी कान्छी छोरी हुन् । आमा गायत्रीका अनुसार एक विवाह समारोहमा गएका बेला कुनै व्यक्तिले बिकरु निवासी अमर दुबेसँग आफ्नो दुई छोरीमध्ये एकको विवाह गराउन उनलाई प्रस्ताव गरेका थिए । झट्ट हेर्दा अमर राम्रा थिए, त्यसैले विहेको कुरा अघि बढाइयो । परिवारजन पनि बिना दाइजो नै कान्छी छोरी खुसीसँग विवाहका लागि राजी भयो । २९ जुनमा उनीहरुको विवाह भयो र ३० जुनमा उनी माइतीबाट बिदा भएर आफ्नो बिकरुस्थित घर गइन् ।
खुसीले आफ्ना पति र घरपरिवारलाई राम्ररी बुझ्न नपाउँदै २ जुलाईमा बिकरुमा प्रहरी ह’त्याका’ण्ड भयो । नयाँ जिन्दगी सुरु हुनअघि नै खुसीको सबै खुसी खतम भयो । परिवारजनका अनुसार विकास दुबे र उनीसँग जोडिएका अमर दुबेबारे टेलिभिजनमा समाचार सुनेपछि उनीहरुको होश नै गु’मेको थियो । उनीहरुलाई अमरविरुद्ध भएको इन्का’उन्ट’रबारे केही भन्नु छैन, तर निर्दोष छोरीमाथि सोच–विचार नगरी प्रहरीले गरेको कारबाहीबाट पुरै परिवार आहत छ ।
कारबाहीमा उठेका प्रश्न
१. के दुई दिनअघि माइतबाट आएकी नवविवाहिताले यति ठूलो षड’यन्त्र रच्न सक्छिन् ?
२. प्रहरीले नव विवाहितमाथि कार’बाही गर्नुअघि कसैसँग कुनै सोधपुछ किन गरेन ?
३ माइती पक्षसँग विकास दुबेको सम्बन्ध थियो या थिएन, यसको छानविन किन गरिएन ?
खातामा भत्ताको रकम राखिएको थाहा पाइयो- आफ्नो खाताबाट रकम कट्टी गर्न आग्रह: …
कैलालीमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको ह’त्या, एकजना बेपत्ता
निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्गसँग हेटौँडा–काठमाडौँ मदन भण्डारी मार्ग जोडिने
मेला, जात्रा लगाउन रोक !
पूर्वमन्त्री यादवको निधन
नायिकाले महाअक्षयवि’रुद्ध लगाइन् बला’त्कार र जबर्ज’स्ती ग…
प्रदेशसभा सदस्य भट्ट र जनप्रतिनिधिसहित पाँच जनामा कोरोना संक्रमण
तपाईंको आज : २०७७ कार्तिक २ आइतवारको राशिफल
पर्सामा प्रहरीद्वारा २२ किलो सुन बरामद
आज विश्व समूदायले गरिबी निवारण दिवस भव्यता का साथ मनाउँदै
लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता चौधरीलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि
अभिनेता राजेश हमालले अब जातको आधारमा हुने वि’भेद माथि ब’हस गर्ने
के लियोनल मेस्सीले सहजै बार्सिलोना क्लब छोड्न पाउलान ?
नेकपा जिल्ला कमिटी द्धारा सामग्री र खाद्य सामग्री सहयोग
मोबाइल सेवा अवरुद्ध भए प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति भराउन सकिने
कोभिड–१९ बाट मृत्यु हुनेकाे विवरण सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्च अदालतकाे आदेश
स्वास्थ्य जोखिम बढ्दो रहेकाले भर्ना शुरु गरी विद्यालय खोल्ने तयारी अन्योलमा